Mamwe maedzo eEV Bhatiri
CCTV. Xinhua News Agency & mamwe makuru enhau anokoshesa kuedza kwaNebula uye mupiro wake mukusimudzira nyowani yekuvandudza simba
Kuti uende pamwe nekuvandudzwa kwepasirese kwe5G smartphone & mota yemagetsi, seimwe yecheni yeindasitiri, ine simba rehunyanzvi hwehunyanzvi, hupamhi hwekutengesa & network yekutengesa, Nebula inoshingairira kuita sainzi & tekinoroji yekuvandudza. Kubva pakavambwa, Nebula ndiye mutengesi akakosha weglob ...
Nebula inotangisa 1.5MW shanduko kuti igamuchire iyo nyowani nguva ye1500V simba rekuchengetedza
1500V ndiyo imwe yenyaya dzinopisa kwazvo muindasitiri yekuchengetedza magetsi. Nekuda kweayo akakosha "kuderedzwa kwemitengo uye kugona kuwedzera", yakakwira voltage yave iko kwehunyanzvi kutungamira kwemazhinji makambani ekuchengetedza magetsi. Pane zvakwakanakira zvitatu zve high-vol ...
Nebula yekutanga batch yekuchengetedza, kuchaja uye kuyedza kwakabatana kwakangwara nekukurumidza kuchaja chiteshi zviri pamutemo kwakatanga kuvaka
Munguva pfupi yapfuura, iri mune mawei Internet yezvinhu pakati, kuaian bhazi chiteshi, mawei nhandare kuchamhembe kwenzvimbo yekuchengetera, kuchaja uye kuyedza kusangana kweakangwara nekukurumidza kuchaja chiteshi zviri pamutemo zvakatanga kuvaka. Aya matatu akangwara anokurumidza kuchaja zviteshi arein ...
Nebulas vakapinda mukubatanidzwa mukuumbwa kwemazhinji emitemo yenyika
Nebulas ndiye akazara-kurudyi nhengo yeNational Automobile Standardization technical Committee Magetsi Mota / Sub-Komiti Simba Bhatiri Mazinga Anoshanda Boka, iyo National Electrotechnical Equipment Standardization technical Committee / Lithium Ion Battery Manufactu ...
Kuvhura Mhemberero yeFujian Nebula Kuedza Technology Co, Ltd.
Mhemberero yekuvhura kweyekubata yakatsigira yeFujian Nebula Electronics Co, Ltd (Pano ichinzi Boka reNebula) - Fujian Nebula Testing Technology Co, Ltd (Kunotevera kunzi Nebula Kuyedza) yakaitirwa kuMawei Dunhu, Fuzhou musi wa 26 Chikunguru....
Nebula akasaina kontrakiti yebasa iri sizing RMB 100 miriyoni yesimba rebhatiri rekuyedza rabhoritari neCATL
Nebula Kuyedza ibato rinobata reFujian Nebula Electronics Co, Ltd. ine iyo yakakura uye yepamusoro yechitatu-bato yekuyedza nzvimbo muChina yemagetsi bhatiri module uye kuyedzwa kwekuita kwesisitimu. Nebula Kuedza kunovavarira kugadzirisa zvinowanzoitika pane akawanda bhatiri syst ...
Nebulas yakanyoreswa zviri pamutemo paShenzhen Stock Exchange
Musi waApril 25, 2017, Fujian Nebula Electronics Co, Ltd. yakaita musangano wekunyoresa paShenzhen Stock Exchange uye zvakamhara zviri pamutemo paGrowth Enterprise Market (chidimbu chemasheya: zvikamu zveNebula, kodhi yemasheya: 300648) zvichiratidza kuti Nebula iri kupinda mune yayo nyowani nguva ye ...
Nebulas yakagadzira nyowani-chizvarwa simba bhatiri pack bvunzo system ine inoshanda mamiriro emamiriro. Iyo KPIs yeiyi sisitimu iri pakati pezvakanakisa zvinopesana nevamwe vakwikwidzi vemusika pasi rose.
Nebula yakagadzira chitsva-chizvarwa simba bhatiri bvunzo system NE400 ine anoshanda mamiriro simulation apo 3ms yenguva ino yekupindura nguva inokurumidza se3ms uye kuchaja / kuburitsa nguva yekuchinja 6 ms. Zvimwe zvigadzirwa KPIs zviri pakati pezvakanakisa kupesana nemamwe musika co ...
Nebula yakagadzira yekutanga China yekuyedza system yebhodhi rekudzivirira rebookbook lithium battery pack.
Nebula yakapihwa pekutanga odha kubva kuTaiwan SMP Kambani yeiyo bvunzo system ye notibhuku retiamu bhatiri paketi yekuchengetedza bhodhi Nekuda kwenzvimbo inotungamira yeSMP inotungamira pakati pekombuta bhatiri indasitiri, yakadaro bvunzo system yawana yakakosha musika kutarisisa iyo ...
48v Bhatiri Kugona Kuburitsa Tester, Bhatiri Kubuda Kwakaita Kugona Tester, 18650 Muedzo, Bhatiri Kubuda Bvunzo Zvekushandisa, Battery Zvoga Kuedzwa Zvekushandisa, Bhatiri Kubuda Tester,